Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ịdọ aka ná ntị ọrịa cancer: Ọkụ obi nwere ike ịdị ize ndụ
N'izu a, America chọpụtara na GERD ma ọ bụ Gastroesophageal Reflux Disease bụ ihe kpatara ikpochapụ akpịrị Onye isi ala Biden. Ọtụtụ mgbe, mgbaàmà GERD anaghị enweta ọkwa dị ukwuu. Nke ahụ pụkwara ịdị ize ndụ.
Ọrịa reflux nwere ike ibute ọrịa cancer esophageal. Mkpocha akpịrị, akpịrị akpịrị, olu na-ada ụda, ụkwara na-adịgide adịgide, ịma jijiji mgbe ị dinara ala, ọbụna nzeze ezé so na mgbaàmà GERD a na-amachaghị. Nji obi bụ otu ihe mgbaàmà onye ọ bụla maara.
Nye ọtụtụ ndị America, mgbaàmà ndị a bụ ịdọ aka ná ntị ha na ha nọ n'ihe ize ndụ maka ọrịa cancer.
Nke a bụ Izu Mmata GERD - ahapụtara ka ọ dabara na nri oke nri nke Ekele. Mana ịkwesighi iribiga nri ókè iji nweta GERD yana ihe egwu ọ nwere ike ibute ahụike gị.
Ọgwụ nwere ike ọ gaghị abụ azịza
Ọtụtụ ndị na-ahụ nrekasi obi dị ka eziokwu nke ndụ ma na-eji ọgwụ ndị a na-ere ahịa eme ihe iji belata mgbaàmà ha. N'ụzọ dị mwute, enyemaka mgbaàmà anaghị ewepụ mmebi azụ nke acid afọ na bile nwere ike ịkpata.
Ọgwụ anaghị akwụsị ịgbasa ihe dị n'ime afọ caustic nke nwere ike ibute ọnọdụ tupu ọrịa kansa akpọrọ Barrett's Esophagus. Nke ahụ na-eme mgbe mkpuchi nke esophagus gị gbanwere ka ọ dị ka afọ gị. Maka ụfọdụ, ọ na-ebute ọganihu na-egbu egbu na ọrịa kansa Esophageal.
Elegharala Oti mkpu
Barrett's esophagus adịghị akpata mgbaàmà ọ bụla. Nke ahụ pụtara na mgbaàmà GERD nwere ike ịbụ naanị ịdọ aka ná ntị gị - ma nwee ike ịbụ isi ihe na-azọpụta ndụ gị!
Mgbe ejidere ya n'oge, enwere ike igbochi Ọrịa cancer esophageal. Usoro nrịanrịa nwere ike iwepụ anụ ahụ Barrett ma kwụsị ọrịa kansa tupu ya amalite.
Ị nọ n'ihe ize ndụ?
Ọtụtụ nde ndị America nwere Barrett's Esophagus ugbu a - ma ha amaghị ya.
Ọtụtụ mgbe, dịka ọ dịịrị di m, ndị ọrịa nwere ọrịa kansa Esophageal anaghị achọpụta na ha nwere nsogbu ruo mgbe ha enweghị ike ilo. Ozugbo ha ruru ebe ahụ, nlanarị na-aghọ ihe siri ike. Naanị otu onye n'ime mmadụ ise a chọpụtara na ọ nwere ọrịa kansa Esophageal ga-adị ndụ afọ ise.
Nke ahụ bụ n'ihi na ọrịa a na-adịkarị n'oge nke na ọgwụgwọ anaghị adị irè.
Ma enwere ike ijide ya n'oge - ma gbochie ya.
Ọ dị mfe ịlele
Maka oge mbụ, ndị ọrịa America nwere ike ịchọpụta ihe ize ndụ ha ugbu a. Ngwa ngwa ilo ngwa ngwa EsoCheck nke nwere pill na-enye nlele esophagus ha dị mfe ma dị ọnụ ala. Nnwale EsoGuard na-eji DNA chọpụta ọnụnọ Barrett's Esophagus.
Nnwale ndị a dị n'ụlọ ọrụ ndị dọkịta na n'ụlọ ọrụ nyocha na Phoenix, Las Vegas, Denver, na Salt Lake City - yana ọtụtụ ebe akwadoro n'ọnwa ndị na-abịa. Mụtakwuo na EsoGuard.com.
Obi dị m ụtọ na ọtụtụ ndị nwere GERD agaghị ebute ọrịa kansa.
Mana nke a abụghị ọrịa ị na-amaja ịhapụ ohere.
Inweta nyocha bụ onyinye kachasị ukwuu ị nwere ike inye ndị ị hụrụ n'anya.
Naanị jụọ puku kwuru puku ezinụlọ dị ka nke m nke ọrịa kansa Esophageal hapụrụ na oche efu n'oge ezumike.
Mindy Mintz Mordecai bụ onye nchoputa nke Esophageal Cancer Action Network, Inc. (ECAN). Di ya nwụnahụrụ ya n'ọrịa Esophageal Cancer mgbe ụmụ ha dị nanị afọ itoolu na iri na abụọ.